Maamulka Juba oo ka hadlay dagaalkii lagu hoobtay ee Kudhaa (Maxey sheegeen?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 9 November 2014 9 November 2014
Mareeg.com: Maamulka KMG ah ee JUBA ayaa maanta ka hadlay dagaal lagu hoobtay oo shalay Alshabaab uga qabsadeen deegaanka Jazeeradda Kudhaa oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose.
Afhayeenka maamulka Jubba Cabdinaasir Seeraar ayaa sheegey in dagaalkii shalay subaxdii ka dhacay Kudhaa ee Al-Shabaab soo qaadeen saddex jeer la jebiyey Al-Shabaab, hubna waa laga furtey, sida uu yiri.
Seeraar ayaa sheegay in Al-Shabaab isticmaaleen saddex gaari oo ismiidaamin ah, taas oo kaliftey in ciidanka maamulja Juba dhufeysyada isaga baxaan.
Cabdinaasir Seeraar ayaa ku sheegay tirada askarta maamulka Juba uga dhintay dagaalkaas ay gaarayaan 15 askeri oo keliya.
Wuxuu sheegay Seeraar in Al-Shabaab ay xasuuq ka geysteen Kudhaa oo ay maalintii shalay keliya dileen 27 qof oo isugu jira haween iyo dhalinyaro.
Seeraar ayaa sheegay in dadkaan loolaayey qabiilka ay yihiin iyo in qaarkood ahaayeen kuwii ciidanka ka gedi jirey wixii ay u baahdaan.
Alshabaab ayaa sheegtay iney dagaalkii shalay ku digeen ilaa 64 ka tirsan ciidamada maamulka JUBA, inkasoo maamulkaasi sheegayo in dadkaas la laayey ay qaarokood yihiin rayid.
Madaxweynaha Somaliland: Waar xanuunsan maayo, dhegna laygama hayo